KDE: ku soo dhawow desktop-ka macneheeda (qeybta 4) | Laga soo bilaabo Linux
Yaa raacay taxanahan (Qeybta 1aad, Qeybta 2aad, Qeybta 3aad) ee maqaallada ayaa arkay qaar ka mid ah waxa KDE sameyn karto, marka la adeegsanayo desktop-ka macneheedu yahay awooddiisa buuxda. Runtu waxay tahay in awooda KDE ay badan tahay, nasiib darose wali wax badan ayaa laga qaban karaa tuubbo muujinaysa adkeyn weligeed ka sii weyn.
Tani waa tabarucaad ka yimid Ernesto Manríquez, sidaas darteed wuxuu noqdaa mid ka mid ah guuleystayaasha tartankeena toddobaadlaha ah:La wadaag wixii aad ka ogtahay Linux«. Hambalyo Ernesto!
Waxaan rabay inaan kuu daayo maqaal ku saabsan sida aan ugu isticmaali karno KDE shaqada, laakiin qaar ka mid ah cayayaanka aan la fileyn ee ku jira nooca 4.10.2 ayaa i joojiyay xilligan. Horeba waxaa ujiray waxyaabo khaldan oo laga heli karo Kubuntu si kastaba ha noqotee, waana inay ku yimaadaan maalmo gudahood bakhaarada Chakra. Taabadalkeed, waxaan idinkaga tagi doonaa xoogaa madadaalo ah, haddii aysan wax soo saar lahayn, qayb ahaan sida loola macaamilo heesaha, sawirrada, iyo fiidiyaha miisaska macnaha.
1 Fayl gaar ah
3 Xarunta Warbaahinta Plasma
Fayl gaar ah
Qeybta 2 ee tilmaamahan waxaan baarnay qaar ka mid ah KIOslaves-ka desktop-ka macnaha. Marka laga reebo kuwa 4 KIOslaves, KDE 4.10 ayaa lagu daray kuwa kale, kuwaas oo aad u xadidan, laakiin sidoo kale shaqeeya. Midkood waa baaritaanka KIOslave: //, kaasoo noo oggolaanaya inaan soo saarno faylal gaar ah. Aynu eegno tan si faahfaahsan.
Ma xasuusataa in Windows-ka ay ku jireen "faylal gaar ah"? Meel hoosaadyada "Users / Username" waxaa ku yaal, Windows, "Maktabadaha" oo ay ku jiraan muusig, fiidiyowyo, sawirro iyo dukumiintiyo. Maktabadahaani waxay u dhigmaan fayl ma guurto ah, oo Windows-ku ula dhaqmo si gaar ah, laakiin iyagu asal ahaan wax kale ma aha oo waa noocyo fayl ah, oo leh wax weyn oo gaar ah oo ah meesha ay barnaamijyada Windows 8 Metro ka raadsadaan macluumaadkooda.
Arrinta layaabka leh ayaa ah in nidaamkii ugu horreeyay ee hawlgala ee isku dayay inuu sameeyo desktop semantic uu ahaa si sax ah Windows, oo leh mashruuca Longhorn. Nidaamkaas qalliinka, Dukumiintiyada, Fiidiyowyada, Sawirada iyo faylalka Muusigga ayaa loo maleynayay inay firfircoon yihiin, ayna ku jiri doonaan dhammaan feylasha kumbuyuutarka. Fikradaha ka dambeeya Longhorn, sida nidaamka fekerka macnaha ee loo yaqaan WinFS, ayaa ka horreeyay waqtigooda waxqabadka alfayaasha horena wuxuu ahaa mid naxdin leh, sidaa darteedna waxay ku dhiirrigelisay Microsoft inay shaqada ka saarto maareeyayaasha oo ay ka xayuubiso Longhorn. Qeybaha yar ee shaqeynayay ka dib markii la joojiyay, oo lagu daray koodh cusub, ayaa ahaa aasaaska Windows Vista.
Gudaha KDE, waxaan ugu dambeyn haysannaa muuqaalkan. Si fiican ayaa loo qabtay, oo leh waxqabad la aqbali karo in ka badan.
Tani waa sida aan u haysanno 4 fayl oo firfircoon, kuwaas oo ku yaal barta loo yaqaan 'Dolphin Places bar', oo waliba ah KIOslaves waana loo isticmaali karaa sidan oo kale.
- raadinta: // dukumiintiyada: Dukumiintiyada
- raadi: // sawirro: Sawirro
- raadinta: // audio: Muusig
- raadinta: // videos: Fiidiyowyo
In galka uu firfircoon yahay ma yara. Waxay ka dhigan tahay xitaa haddii dukumiintiyada, fiidiyowyada, sawirrada ama heesaha ay ku jiraan meelaha hoose ee galka ay ku qoran tahay NEPOMUK, waxaa laga heli doonaa faylkan. Maaddaama ay yihiin fayl gaar ah, mid baa ka raadin kara qoraaga, cabbirka sawirka. Banaanbax.
Daawo. Faylka Sawirada waxaa ku jira, sawir kasta hoostiisa, cabirka fayl kasta, oo ah pixels. Dhanka kale, galka maqalka waxaa lagu amrayaa magac ahaan, taariikh ahaan, ama farshaxankiisa, hees walbana waxay muujineysaa magaceeda dhabta ah iyo mudada ay qaadaneyso. Saddexdaasi waa fayl gaar ah, markasta oo aad soo degsato maqal cusub, sawir cusub, ama fiidiyoow cusub, iyaga ayaa is cusboonaysiin doona. Ilaa iyo inta NEPOMUK arki karto iyaga.
Hadda maxaan ku qabannaa tan? Dhowr barnaamij oo KDE ah ayaa horeyba ugu isticmaalaya NEPOMUK keydkooda keydkooda.
Amarok 2.7 wuxuu ku soo daray, qaab tijaabo ahaan ah, muuqaal cusub oo Sayniska Ururinta ah. Marka, halkii ay ku ilaashan lahayd keydkeeda macluumaadka, Amarok wuxuu adeegsan doonaa NEPOMUK, isagoo keydinaya xusuus aad u tiro badan inta howshu socoto. Waa wax lamid ah wixii Bangarang sameeyay, barnaamij nasiib daro gaabis ku ah horumarkiisa isla markaana leh dhibaatooyin daran KDE 4.10. Si aad udhaqaajiso muuqaalkan waa inaan:
1. Xullo Xulashooyinka | Deji Amarok.
2. Tag Dhameystirka oo dhaqaajiso «Nepomuk Collection».
Intaas ka dib, Amarok wuxuu soo bandhigi doonaa aruurin gooni ah, oo loo yaqaan "Nepomuk Collection", oo ay la socdaan dhammaan heesaha uu Semantic Desktop ku muujiyey. Xulashadani waxay leedahay waxoogaa dhibaatooyin ah xilligan, laakiin waxaan rajeynayaa in wax walba ay ku habboon yihiin Amarok 2.8.
Xarunta Warbaahinta Plasma
Barnaamijkan, oo soosaaray nuuciisa koowaad, waa mid cajiib ah waxaanan filayaa in taageere kastaa oo ka tirsan Semantic Desktop inuu haysto. Waxay u egtahay sidan.
Waxa ka dambeeya waa fiidiyoow, oo lagu ciyaaro dardargelinta OpenGL. Sida aad arki karto, isdhexgalka ayaa toos ah, waxaadna leedahay laba ikhtiyaar. Waad ku sahamin kartaa habka caadiga ah, adigoo ka dhex baaraan-galaya faylalka, ama waxaad weydiisan kartaa Xarunta Warbaahinta ee Plasma inay isticmaasho ururinta macnaha si loo muujiyo dhammaan fiidyowyada, maqalka ama sawirrada uu qofku leeyahay. Adeegso. Haddii aysan soo gaadhin qaybintaada, weydii. In Chakra Linux waxaa lagu rakibay sidan.
pacman -Sy plasma-dhexdhexaadiye
Aynu rajeyneyno in qaladaadka qalad ee KDE 4.10.2 ay ku dhufteen bakhaarrada qof walba si aan ugu sii wadno taxanahan. Ku raaxayso Semantic Desktop ilaa waqtigaas.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Isticmaal FileLet » KDE: ku soo dhowow desktop-ka macnaha (qaybta 4)
Maya. Suuragal maahan in lagu qeexo shaandhooyinka taban faylalka firfircoon ee NEPOMUK, in kastoo aragti ahaan nidaamku awood u leeyahay inuu sidaa sameeyo.
Jawaab Ernesto Manriquez Mendoza
Ma laga saari karaa in galka sawirada uusan muuqan ama fiidiyowyada?
Jawaab si Nicolas Rull
Sawiradu waa fooraraan 😉
Jawaab Ernesto Manríquez
Oobow! La saxay. 🙂